Bit Calculator - Inguqulela bit, Byte, ikhilobhithi, ikhilobhayithi, megabit, imegabhaythi, gigabit, igigabhaythi and more ...
Yenza Ukutjhugululwa hlangana izingcezu, bytes, kilobits, kilobytes, megabits, megabytes, gigabits, gigabytes, terabits, terabytes, petabits, petabytes, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Uhlobo bit - b Byte - B Kilobit - Kb Kilobyte - KB Megabit - Mb Megabyte - MB Gigabit - Gb Gigabyte - GB Terabit - Tb Terabyte - TB Petabit - Pb Petabyte - PB Exabit - Eb Exabyte - EB Zettabit - Zb Zettabyte - ZB Yottabit - Yb Yottabyte - YB
Band ububanzi (Kilo = 1000 bits)
Amanothi:Inani K (Kilo) ngesikhathi izibalo kungathatha amagugu 1024 noma 1000 ezimbili, kuncike uhlobo sibalo ofuna ukwenza. Cabanga usebenzisa K = 1024 uma ucabangela isitoreji umthamo kungaba disk hard, ama-DVD, ngemoto noma flash noma amanye amadivaysi kanye kwisitoreji semidiya. K = 1000 kufanele kusetshenziswe uma ucabanga throughput, ie ngejubane lapho ulwazi idluliswe.
Isibonelo: Uma ikhompyutha yakho ine 1 KB sediski uthi anakho 1024 B of space, manje throughput ikhadi lakho inethiwekhi 1 KB/s ke kuthiwa ukuthi ithumela ukwaziswa 1000 B/s.
Ukusetshenziswa: Faka value and unit bese uchofoza ukuguqula, umshini wokubala uzolifeza ukuguqulwa bonke amayunithi.
"Sinikeza yokubala ezihlobene emhlabeni computer."